Electric Power rakiban
Shanghai Shenyong takhasusay naqshadaynta, wax soo saarka iyo iibinta line janjeedha korontada oo hubkiisa u haysa. Waxa kale oo ay bixisaa taxane adeegyada macaamiishayada sida rakibaadda, dib u dhiska, dayactirka intay qalabka farsamo iyo dib u dhiska & dayactirka qalabka korontada gacanta, wax soo saarka iyo iibinta dhismayaasha, la talinta ganacsiga, bararto koorta, processing ee accessories trailer. Shirkadda yahay suuqa u janjeedha labada gudaha iyo dibaddaba oo la siiyaa Class ururka A shirkadaha. Waxay ku takhasustay soo saarista korontada iyo isgaarsiinta line Hank oo hubkiisa u haysa pre-knotting waxyaabaha taxane fudud iyo sheeko ku salaysan. Waxyaabaha lagu codsatay in si ballaadhan isgaarsiinta, network xoog, electrified.
Tareenka, iyo cable fiber-optic. waxyaabaha Our leeyihiin tayo iftiinka, adag-machining, si fudud ku rakiban iyo keydinta tamarta taas oo u oggolaanaysa in Fadilmo la nooca kale ee clamps korontada iyo isgaarsiinta oo hubkiisa u Isma barbardhigi kartid.
Shirkadda waxaa la siiyaa gobolka-of-the-farshaxanka qalabka iyo talanti farsamo heer sare ah, raad-qoraal howlgalka ka mid ah "tayada ugu horeysay, daacadnimo wayn" iyo u doodista ruux ganacsi ee "midnimada & pragmatism, ballaarinta & furitaankii" ah. Waxay sidaan marayo ISO 9001: 2008 Standard ogsoon oo ka dhigaysa heerka waafaqsan mar-hubi ku salaysan ilaa 98% iyo heerka ku qanacsanaanta macaamiisha 'ilaa 100% taasi oo ka been abuurtay dhaafin, maamulka sayniska, adeegga daacad ah iyo qanacsanaanta sugan. waxyaabaha Our daboosha baahida ay u dhiska iyo dhismaha shabakad korontada. Dhanka kale, shirkadda kor u qaadi doontaa tayada alaabta iyo adeegyada si joogto ah si ay u qanciso baahiyaha soo socda ku dhaqanka caalamiga ah, ee bixiya adeegyada dhalmada mayrofoon ugu wanaagsan ee macaamiisheena.